သာလွန်ဇောင်းထက်| December 31, 2012 | Hits:4,000
| | ပြင်းထန်လာနေသော စစ်ပွဲများကြောင့် ကချင်စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များ ပိုမိုထိတ်လန့်နေကြသည် (ဓာတ်ပုံ- ဧရာဝတီ)
မြန်မာပြည်သား December 31, 2012 - 6:06 pm 88 students are only the HOPE of Burmese Minorities……….
Reply kyawkyawlwin December 31, 2012 - 6:21 pm ဘာသာစကားများရဲ့ အဘိဓါန်တွေက သမတ ကို တူညီတဲ့အနက်ပေးနေလိမ့်မယ်၊ယေဘူယျကျကျပေါ့ ဒီနေ့ နိုင်ငံအတော်မျာျးများက တရုတ် အင်ဒိယ ရုရှားဖယ်ဒရေးရှင်း အမေရိကန် မြန်မာ သမတ အဓိပါယ်ကတော့အတော့်ကို ကွဲလွဲနေမယ်။ သက်ဆ်ုင်ရာရွေးကောက်ပွဲ အမျိုးမျိုး ပါတီ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့ မဲ အမျိုးမျိုးနဲ့ တက်လာတာတွေပါဘဲ။ ပြည်သူရဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့ ရည်ရွယ် လိုလားချက် ၊ သမတကိုယ်တိုင်ရဲ့ ပင်ကိုယ် လိုလားချက်ရည်ရွယ်ချက် တွေကို အသေးစိတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်နိုင်မယ်ဆိုရင် အံ့သြစရာတွေ တွေ့ရမယ်။
Reply Thandar Oo January 1, 2013 - 1:26 am ၈၈အကိုတို့ရဲ့အရည်အချင်းကိုယုံပါတယ်..နှစ်ဖက်စလုံးကိုချွင်းချက်မရှိအပစ်ရပ်ဖို့ဆောင်ရွက်ပေးပါ..နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေဆက်လုပ်ပါ..KIO/KIA နဲ့အစိုးရတပ်မတော်နှစ်စလုံးUnconditionally အပစ်ရပ်ပေးဖို့ အရင်ဆုံးလုပ်ပေးပါ..သမီးတို့ဘ၀ကကျီးလန့်စာစားပါ..KIAလူကြီးတွေကိုလည်းတိုက်ရိုက်မပြောရဲဖူး..အစိုးရနဲ့ကလည်းအဝေးကြီး..သမီးတို့ဗုံးခိုကျင်းထဲကထွက်ချင်ပါပြီး..တပည့်တွေကိုလည်းအေးအေးချမ်းချမ်းစာသင်ပေးချင်လှပါပြီ..ဒီဖက်မှာအင်တာနက်ရတုံးပြောရတာ.ဧရာဝတီကလည်းသမီးCommentကို၈၈အဖွဲ့ကိုရောက်အောင်ပို့ပေးပါ..တပ်တွေရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လုပ်ဖို့ညှိတာနဲ့ သမီးတို့ဗုံးခိုကျင်းထဲရောက်ရတာပါပဲ..ဒါကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးချွင်းချက်မရှိလို့ပြောရတာပါ..သာမန်ပြည်သူတွေကို အားလုံးကသနားကြပါ..ရာသီဥတုကလည်းအရမ်းအေးလှပါတယ်ရှင်..
Reply Thandar Oo January 1, 2013 - 8:26 am သနားစရာဘဝတွေပါ